Samy manana ny « posologie » ireo mpizara sy mpanentana an` ity tambavy ity. Misy mahazo ilay 1litatra isaky ny olona. Misy nahazo dia milaza fa ampy ho an'olona folo ilay 1 litatra hoy ny mpizara. Misy indray no miteny fa ilay 1 litatra ho an` ny olona efatra. Misy miteny fa 1 litatra ho an'olona iray ihany. Somary fanina ny olom-pirenena. Raha ny hita eny amin` ny tambajotra serasera dia tavoahangy 33 cl roa isan-andro mandritry ny 7 andro ny fatran` ny CVO. Mila mazava tsara fa sao hitera-doza izany ho an` ny vahoaka Malagasy. Efa maro ireo firenena no mitsikera ny fitondram-panjakana noho ity tambavy ity ka sao serasera diso lalana no hanimba ireo ezaka vita.